Laptọọpụ MSI: nhọrọ nke ụdị kachasị mma na ọnụahịa kacha mma
na MSI laptọọpụ Ha na ụwa egwuregwu nwere njikọ chiri anya, n'agbanyeghị na e nwekwara ụdị emebere maka ndị ọrụ ndị ọzọ chọrọ atụmatụ ndị ọzọ. N'ezie, ụlọ ọrụ ahụ malitekwara ụdị ndị ọkachamara ya, ya bụ, ngwá ọrụ emebere maka akụkụ azụmahịa.
Na mgbakwunye, ma maka otu na ebumnuche ọzọ, ịchọrọ uru kacha mma. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ ahụ jisiri ike jikọta arụmọrụ nke Intel, AMD na NVIDIA ka ha nwee ike inye ndị otu ha ọrụ kachasị ike na ngwọta mobile.
1 Laptọọpụ MSI kacha mma
2 MSI ọ bụ ezigbo akara laptop?
3 Ụdị laptọọpụ MSI
3.1 Ịgba Cha Cha
3.2 Series Onye Okike
3.3 Azụmahịa & Nrụpụta
3.4 Ụlọ ọrụ
4 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ MSI dị ọnụ ala
5 Laptọọpụ MSI emezigharịrị, ọ bụ ezigbo nhọrọ?
6 Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ MSI dị ọnụ ala?
7 Ajuju ajuju ajuju
7.1 Otu esi arụ ọrụ igwefoto nke laptọọpụ MSI
7.2 Enwere ike ịgbanwe eserese nke laptọọpụ MSI?
7.3 Otu esi abanye BIOS nke laptọọpụ MSI
8 Laptọọpụ MSI, ọ bara uru ya? Echiche m
Laptọọpụ MSI kacha mma
MSI nke oge a ...
MSI ugwu 14 ...
MSI GS66 Stealth ...
MSI ugwu 15 ...
MSI ọ bụ ezigbo akara laptop?
MSI (Micro-Star Mba) bụ ụlọ ọrụ teknụzụ Taiwanese mara nke ọma maka nne nne ya. Ma, dị ka o mere na ndị ọzọ, ọ gbasaa azụmahịa ya karịa efere ma chọọ ọkachamara na ngwá ọrụ dị elu, karịsịa egwuregwu.
Ọtụtụ Ndị egwuregwu na-achọ laptọọpụ na-atụgharị na MSI maka akụrụngwa siri ike nke ika a na-ebuli, na-enye ụdị dị ike nke ukwuu nwere àgwà yiri nke ndị mmegide ndị ọzọ na-enye, dị ka ASUS na Acer.
Na nkenke, ọ bụrụ na ịzụtara otu MSI, ị ga-enweta ngwaahịa dị mma na ezigbo anụ ọhịa nke nhazi, ya Ụfọdụ CPU na GPU kachasị ike n'ahịa, n'ezie dị ịrịba enyo, RGB backlit keyboard, na ihe niile ị na-atụ anya site na ezigbo kọmputa nwere àgwà ndị a.
Ụdị laptọọpụ MSI
Akụkụ ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ na ị ga-ahụ laptọọpụ MSI iji mejuo ụdị ndị ọrụ dị iche iche ekele ndị siri ike ma ọ bụ oke ọ na-enye. Ọ dị mkpa ịmara ha ka ha nwee ike ịhọrọ nke ziri ezi.
MSI GF75 dị mkpa 10UEK-029...
MSI GP76 agụ owuru ...
MSI GF63 dị mkpa ...
Ọ bụ usoro ahaziri maka izute mkpa nke gamersNke ahụ bụ, na CPU dị mma maka egwuregwu vidiyo, GPU dị ike nke ukwuu, keyboard dị mma, na ihuenyo buru ibu nke nwere mkpebi kachasị mma na ịdị mma, ogwe ndị na-enye ihe kachasị mma na egwuregwu vidio, yana ezigbo ugboro na ume ọhụrụ.
N'ime nke a Ngalaba ị ga-ahụ ọnụọgụgụ:
Ọnụ ego nke GS Stealth
GP agụ owuru
GL agụ owuru
GF dị mkpa
E wezụga nke ahụ, n'oge na-adịbeghị anya ọ gbakwunyekwara AMD teknụzụ inye otu n'ime laptọọpụ egwuregwu kacha mma nwere teknụzụ 7nm:
Series Onye Okike
MSI Onye Okike M16 ...
MSI Onye Okike 15 ...
N'ime usoro isiokwu a, ị gaghị ahụ ọtụtụ ụdị dị iche iche dị na nke egwuregwu. Enwere naanị otu usoro okike ezubere maka ndị okike nke ọdịnaya. Ya bụ, laptọọpụ MSI nke ịchọrọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ihe osise, ịchọrọ ya maka ịmegharị foto, ndezi vidiyo, wdg, ebe ọ na-enye arụmọrụ eserese dị elu na nnukwu arụmọrụ.
Azụmahịa & Nrụpụta
N'ụzọ ụfọdụ, ha yiri nke a dị n'elu, dịka e bu n'obi ime ya arụpụtaghị ihe na gburugburu azụmahịa. Site na ha, a na-enweta nnukwu nrụpụta n'ọrụ, ike na mbugharị. Ngwọta emebere nke ọma maka ndị chọrọ ngwa ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na ntụkwasị obi.
N'ime oke a ị ga-ahụ usoro:
Akpa akpa ọrụ MSI ...
Ụlọ ọrụ MSI...
Egwuregwu MSI Stealth 15M...
Usoro nke ọzọ a bụ maka ndị na-achọ ihe ọma otu ọrụ, na oke arụmọrụ maka ibu dị arọ, dị ka nchịkọta, nsụgharị, ime ihe nke ọtụtụ igwe yiri ya, wdg. N'ime usoro isiokwu a ị nwere:
Ezigbo ụlọ ọrụ ọkachamara mobiles maka ọtụtụ ọkachamara ọkachamara. Inye otu n'ime àgwà kachasị mma, mgbanwe, na ntụkwasị obi na klaasị ya, yana arụmọrụ adịchaghị mma.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ MSI dị ọnụ ala
Ụlọ ọrụ a na-ewu ewu nke ukwuu, yabụ na ọ gaghị esiri ike ịchọta ụdị laptọọpụ MSI. Ị nwere ike nweta otu n'ime otu ndị a n'ụlọ ahịa dị ka:
Amazon: Nnukwu ikpo okwu ịre ahịa n'ịntanetị bụ otu n'ime ahịa ahịa kachasị amasị ọtụtụ ndị na-azụ ahịa. Ọ bụghị naanị n'ihi ọsọ nke nnyefe (karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ Prime) na ezigbo ọrụ ọ na-enye, kamakwa n'ihi na ọ na-enye nkwa kachasị elu ma ọ bụrụ na ị nwetaghị ihe ị tụrụ anya ya, yabụ ị ga-enwetaghachi ego gị. Na mgbakwunye na nke ahụ, uru ọzọ bụ na ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị ụdị MSI, yabụ ị nwere ike họrọ nke kacha dabara maka mkpa gị, na-enweghị ịhọrọ otu n'ime ndị enyere gị, ọbụlagodi na ọ bụghị ya. nke kacha dabara maka mkpa gị. ị na-achọ ...
Ụlọikpe Bekee: nnukwu ụlọ ahịa Spanish nwekwara ụfọdụ ụdị MSI, n'agbanyeghị na ọ bụghị ka ọ dị na Amazon. Ọzọkwa, ọnụ ahịa nke yinye a abụghị nke kachasị asọmpi. N'aka nke ọzọ, ọ nwere uru nke ịbụ ebe ntụkwasị obi, na-ekwe nkwa, yana ezigbo ọrụ ndị ahịa ma ọ bụrụ na ihe adịghị mma. Ma, n'ezie, ị nwere nhọrọ nke ịga zụta ya n'onwe gị na ụlọ ahịa anụ ahụ dị nso, ma ọ bụrụ na ịchọghị ichere, ma ọ bụ tụọ ya n'ịntanetị ka ebuga ya n'ụlọ gị.
nrutu: yinye French ọzọ a nwere àgwà yiri nke gara aga, na-enwe ike ịzụta ngwá ọrụ ma online na n'onwe. Dị ka nke ọzọ, ọ nwekwara obere ụdị, na-enyeghị ọtụtụ ohere dị ka Amazon. Banyere ọnụ ahịa, nke bụ eziokwu bụ na ha dị ezigbo mma, na-enweghị n'etiti ndị dị ọnụ ala, mana ha abụghịkwa ndị kachasị ọnụ.
Ihe PC: Onye nkesa nke Murcia nwere nnukwu ngwaahịa, na mgbakwunye na inwe ụdị MSI dị iche iche na ọnụ ahịa dị oke mma. Ya mere, n'echiche ahụ ọ nwere ike ịsọ mpi Amazon. N'ezie, ọrụ ndị ahịa ha na-adịkarị mma, ha na-ebukwa ngwa ngwa ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha nwere ihe nlereanya dị na ụlọ nkwakọba ihe.
mediamarkt- Agbụ German ndị ọzọ nwere nhọrọ nke ụdị laptọọpụ MSI ịhọrọ. Ọnụ ahịa ha na-asọmpi, ma ị nwere nhọrọ nke ịzụrụ ha abụọ na ebe ịre ahịa kacha nso na ịtụ ya n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ịnweghị isi ihe ọ bụla dị nso ma ọ bụ na ị chọghị ịga njem.
Laptọọpụ MSI emezigharịrị, ọ bụ ezigbo nhọrọ?
Ọ bụ ajụjụ siri ike ịza, ebe ọ bụ na ụdị ngwá ọrụ a emezigharịrị, ma ọ bụ megharịa; Enwere ike ịre ha ọnụ nke ọma n'okpuru akụrụngwa nkịtị. Na ụkpụrụ, ọ dịghị ihe dị njọ na ịzụrụ kọmpụta reconditioned, ebe ọ bụ na ọ kwesịrị ịdị mma na ọ ga-enwekwa nkwa ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ na-ahọrọ izere ụdị ngwaọrụ ndị a.
El ebumnobi bụ na ọ bụghị mgbe niile ka a na-ama ihe mere e ji tinye ya akara dị ka ihe ndozigharị. Ọ nwere ike ịbụ na ọ bụ ngwá ọrụ ekpughere na ihe ngosi ma ọ bụ ihe ngosi na ya mere enweghị ike ire ya dị ka nke ọhụrụ, na ọ nweghị nkwakọ ngwaahịa mbụ, ma ọ bụ n'ihi na ọ nwere ụdị mmebi na casing nke na-eme ya. adịghị egbochi ya ịrụ ọrụ ma mara mma Ọ naghị ekwe ka ire ere ya, na ọbụna na onye ọrụ na-enweghị mmasị na ya weghachiri ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka ịrụzi.
N'ozuzu, ha bụ ndị otu na-arụ ọrụ dị ka amara na-enweghị inye nsogbu. N'ezie, ha nwere ike ịbụ ndị a pụrụ ịdabere na ya dị ka nke ọhụrụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ chọrọ igwu egwu ya na nchekwa wee họrọ nke ọhụrụ, na-echefu uru dị ka:
Ị nwere ike ịma ọkwa ya na nkọwa ngwaahịa, ebe ọ bụ na ọtụtụ nyiwe na-egosi ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịkọwapụtaghị ya, ị ga-ala azụ.
Akwụkwọ ikike kpuchiri gị ka ọ dị ọhụrụ, ebe European Union nyere iwu ka eme nke a. Ị nwere ụbọchị 30 iji weghachi ngwaahịa ahụ dịka ị ga-eme nke ọhụrụ.
Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ MSI dị ọnụ ala?
Oge ọ bụla bụ ohere dị mma iji nweta laptọọpụ MSI, ebe ọ bụ na kọmputa ndị a bụ ezigbo ngwaọrụ maka ọrụ ma ọ bụ ntụrụndụ. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ụbọchị ebe ị nwere ike nweta ya dị ọnụ ala na-emekarị:
Black Friday: A na-eme mmemme America a na Fraịde ikpeazụ nke ọnwa Nọvemba nke afọ ọ bụla wee gbasaa n'ụwa niile. N'ụbọchị a, ọbụlagodi n'ụbọchị ndị gara aga, ọtụtụ nnukwu ụlọ ahịa na obere ụlọ ahịa, ma anụ ahụ na ntanetị, na-enye nnukwu ego na ngwaahịa ha. Ụfọdụ nwere ike iru ihe ruru 20-30% mbelata na ọbụna karịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe atụ ochie.
Ụbọchị Mbụ: Ọ bụ ihe omume na-eme kwa afọ na Amazon, na-enye onyinye pụrụ iche naanị maka ndị ahịa Prime ya. Ndị niile debanyere aha na ọrụ adịchaghị ga-enwe nnukwu mbelata nke na-agbakwunye ọsọ nke mbupu na ụgwọ mbupu n'efu nke ha na-enwetalarị n'oge ọ bụla n'afọ.
Cyber ​​Monday: Ọ bụrụ na ị tụfuru Black Friday ma ọ bụ na ị nweghị ohere ịchọta ụdị ịchọrọ ire ere, ohere ọzọ bụ Monday na-esote. Ụbọchị Mọnde na-esote Black Friday bụkwa ụbọchị pụrụ iche nke nwere nnukwu mbelata ego, ọkachasị na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Ajuju ajuju ajuju
Ọ bụrụ na ị ga-azụta laptọọpụ MSI ma ọ bụ nweelarị nke, n'ezie ụfọdụ obi abụọ na-awakpo gị. Ụfọdụ n'ime ndị na-emekarị bụ:
Otu esi arụ ọrụ igwefoto nke laptọọpụ MSI
Na ụdị MSI, ndị kamera webụ arụnyere, mana anaghị enyere ya aka ozugbo dịka ọ na-eme na ụdị ndị ọzọ. Nke a bụ maka nzuzo onye ọrụ, inwe ike ileghara ya anya ebe ọ bụ na ndabara nwere nkwarụ.
Ya mere, otu n'ime ajụjụ ndị nwe otu MSI na-ajụkarị bụ ka esi eme igwefoto. Maka nke ahụ, naanị ị ga-emerịrị ya soro usoro ndị a:
Gbanwuo kọmputa gị.
Nweta nnọkọ gị.
Jide igodo Fn (ọrụ) na ahụigodo gị yana mgbe ịpịrị F6.
Ugbu a a ga-eme ka kamera weebụ gị rụọ ọrụ.
Enwere ike ịgbanwe eserese nke laptọọpụ MSI?
Ọ dabere na oke. N'ụdị ụfọdụ dị ọnụ ala, dị ka GP, GE, wdg, a na-ere GPU ndị ahụ na motherboard, yabụ enweghị ike dochie ha ngwa ngwa. Ọ ga-ewe usoro ịgbagha (inwe ike ịwụnye otu nkọwapụta nke ị nwere, ọ bụghị nke ọzọ), ọ bụ ezie na anaghị m akwado ya n'ihi mmebi ọ nwere ike ime na ihe ndị ọzọ n'ihi okpomọkụ nke a na-edobe n'oge usoro ahụ. . N'aka nke ọzọ, na akwụkwọ ndetu MSI dị oke ọnụ karị, ị nwere ike ịhụ eserese na usoro MXM.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na mgbanwe nke ịchọrọ ịme abụghị n'ihi ọdịda ngwaike eserese, kama ọ bụ naanị mmelite iji melite arụmọrụ, ị nwere ike ịhọrọ oge niile. tinye kaadị eserese mpụga. Nke a bụ ihe ngwọta maka usoro ọ bụla nke akwụkwọ ndetu MSI.
Otu esi abanye BIOS nke laptọọpụ MSI
Ụdị ọ bụla nke laptọọpụ ma ọ bụ motherboard nwere ọdịdị nke banye BIOS / UEFI, n'agbanyeghị na ị nwere ike họrọ mgbe niile iji ọrụ Windows tinyekwa. Ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ime ya site na usoro akwụkwọ ntuziaka, n'ihe gbasara laptọọpụ MSI, usoro a ga-abụ:
Pịa igodo Del ugboro ugboro (kpachara anya na ụfọdụ kọmputa ebe enwere abụọ, otu n'ime ha anaghị arụ ọrụ).
Nhọrọ ọzọ, ọ bụrụ na nke dị n'elu anaghị arụ ọrụ, bụ ịpịa Surp na Backspace.
Laptọọpụ MSI, ọ bara uru ya? Echiche m
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ n'obi ma ọ bụ onye na-egwu egwuregwuN'ezie, ị gaghị eche maka inwe otu n'ime otu ndị a, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịnye gị kacha. Ihe niile ịchọrọ yana ụdị laptọọpụ ndị ọzọ enweghị ike ịnye, ọbụlagodi na akpọrọ ha dị ka akụrụngwa “egwuregwu”. Na mgbakwunye, n'ịbụ ndị dị ike, ntinye ego mbụ dị elu na-akwụ ụgwọ site n'ịghara imelite laptọọpụ gị ugboro ugboro, na-enwe ike ịga n'ihu na-akpọ aha AAA ọhụrụ na-apụta n'enweghị nsogbu.
N'aka nke ozo, ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara nke nwere ọkwa dị mma nke akwụkwọ ọnụahịa, nwekwara ike irite uru na uru niile ha na-enye maka gburugburu ụlọ ọrụ, na-eme ka arụpụta ọrụ dịkwuo mma ma nweta uru dị ukwuu. N'agbanyeghị ọnụ ahịa ha dị elu, enwere ike ịmegharị ha n'ime obere oge, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịhọrọ ụdị dị mma karịa n'ime oke dị ugbu a.
Na naanị ikpe nke ọ gaghị aba uru Laptọọpụ MSI bụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ị ga-egwu mgbe ụfọdụ, ma ọ bụ na ịchọghị ịrụ ọrụ dị ukwuu, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-emegharị ngwa ahụ ugboro ugboro, ebe ọ bụ na ị ga-emefu ego ka ị nwee ike idozi maka ndị ọzọ. ụdị dị ọnụ ala . Ma ọ bụ n'ọnọdụ ndị ahụ ebe ịchọrọ ibu ụzọ na-agagharị agagharị, ebe ọ bụ na ha bụ ngwá ọrụ na-eri ọtụtụ ihe n'ihi arụmọrụ dị elu, nwee nnukwu olu, ma na-atụkwu ibu.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » MSI laptọọpụ